Tungaloy Fekitori | China Tungaloy Vagadziri, Vatengesi
Tungaloy iso lathe mapanga CCMT060204-PS NS9530
Zvimiro zveTungaloy lathe mapanga: 1.Original Tungaloy brand kubva kuJapan. 2.Tungaloy lathe mapanga akakodzera machining simbi. 3.Tungaloy lathe mapanga ane akasiyana zvigadzirwa zvekucheka, kukuya uye threading. Kugadzikana uye chengetedzo yeTungaloy lathe mapanga ari mukubudirira kutendeuka. 5.ISO & ANSI nzvimbo yekushandisa. 6.Tine dura hombe reTungaloy lathe mapanga mudura redu uye tinogamuchira odha yako. Rondedzero yeTungaloy lathe mapanga: Brand Zita: Tungaloy Plac ...
Yekutanga Japan yakaita Tungaloy carbide inopinza CNMG120408-TM T9125
Zvimiro: 1) .Japan Tungaloy brand; 2) .Tungaloy carbide inoisa ndeyezvinangwa zvakajairwa / yakawanda-chinangwa kucheka; 3) .Kuvandudza chipping kuramba; 4) .Stronger yekunamatira adhesion; 5) .Kuvandudza kupfeka kuramba; Kugadzikana uye chengetedzo mukubudirira kutendeuka; 7) .Long turusi upenyu Continous uye kuvhiringidzika nokuveza; 8) .Mhando dzakasiyana uye mamakisi esarudzo. Main Parameter: 1) .Mukurumbira Brand: Tungaloy; 2) .Nzvimbo yeKutanga: Japan; 3) .Material: Tungsten Carbide / Hard chiwanikwa / Cermet; 4) .Delivery: Sho ...
Tungaloy carbide inoisa cnc milling inoisa LNMU0303ZER-MJ AH725
Tungaloy yekucheka maturusi giredhi tsananguro: P Simbi (yekumhara CVD) T9005 simbi yekugadzirisa zvinhu; T9015 Kuvhara mhedzisiro kunogona kuwanikwa nekuvharirwa kwakanaka kuchipedza kuramba; kushandisa yakatsaurwa boka T9025 dzakateedzana uye ina mhando dzezvinhu dzinogona kuiswa munzvimbo dzese dzesimbi kutendeuka. T9035 / T9005: yekumhanyisa-kumhanyisa yekucheka uye zvimwe zvinodiwa mumunda weanopokana-kupfeka zvivakwa, inogona kutamba yakanaka performance. T9015: kuramba kuzvicheka mamiriro abrasion kuramba uye chipping kuramba ...
Yekutanga Tungaloy LQMU inoisa yekugaya muchina inoisa LQMU110708PNER-MJ AH725
Zvimiro zveTungaloy yekugaya muchina inoisa: 1.Original Tungaloy brand kubva kuJapan. 2.Tungaloy yekugaya muchina inoisa yakakodzera machining simbi. 3.Tungaloy yekugaya muchina inoisa ine dzakasiyana siyana zvigadzirwa zvekucheka, kugaya uye tambo. Kugadzikana uye chengetedzo yeTungaloy yekugaya muchina inoisa iri mukutenderera kune zvibereko. 5.ISO & ANSI nzvimbo yekushandisa. 6.We tine hombe stock yeTungaloy yekugaya muchina inoisa mudura redu uye tinogamuchira odha yako. Tsananguro ...
Tungaloy carbide yekugaya inoisa RPMT1204MO-M01 AH120 kutenderera carbide inoisa
Zvakanakira: Mutengo Wakanakisisa: Mitengo yedu inokwikwidza kupfuura vamwe vatengesi. Uye paunowedzera kuraira, ndipo paunowedzera dhisikaundi. Pfupi Dhirivhari: Isu tinoronga odhiyo yako iwe mushure mekubhadhara. Iko kusimba kwakasimba kunovimbisa chinhu chekuendesa kwauri. Yakakwira Hunhu: Iyo effiency uye yepamusoro- kuita kutema kuchakubatsira iwe mune yakanaka mamiriro! Technical rubatsiro: mainjiniya edu anogona kubatsira kugadzira hwokugadzira hurongwa CNC nokuveza muchina nokuveza Ezvemutauro gungano, uye kupa pashure-okutengesa basa Pr ...
Tungaloy cnc grooving inoisa WGE30 GH730
Kubatsira kweTungaloy cnc grooving inoisa: 1. 100% yekutanga Japan Tungaloy brand. 2. Giredhi: Makisi akasiyana siyana esarudzo 4. Mutengo wakanakisa uye kuendesa nekukurumidza. 5. Kumusoro kupfeka kuramba, kuomarara kwakasimba uye kuomarara kuomarara 6. Yepamberi tekinoroji, chaiyo kukuya 7. Mirairo midiki inogamuchirwa Magadzirirwo eTungaloy cnc grooving inoisa: Item zita: Tungaloy cnc grooving inoisa Brand: Tungaloy Model: WGE30 GH730 Giredhi: GH730 .. .